UBaxter uchaza ngokubiza oweChiefs
Umdlali weChiefs uDaniel Cardoso obizwe kwiBafana. Isithombe: Mbombela StadiumPic Sydney Mahlangu/ BackpagePix
UMQEQESHI weBafana Bafana uStuart Baxter ngoLwesibili umemezele abadlali azogadla ngabo kwi-African Cup of Nations ezobanjelwa e-Egypt ngoJuni.
UBaxter umemezele iqembu labadlali abawu-30, okuyisibalo asozosinciphisela ku-23 njengokomthetho we-Afcon.
Kubadlali abaqokwe uBaxter ubale abayisithupha beMamelodi Sundowns, abane beBidvest Wits kwathi kwiChiefs nePirates wathatha abathathu eqenjini ngalinye.
Utomule ababili kwiSupersport United nakwiCape Town City iqembu ngalinye, wabe esetomula oyedwa weMaritzburg United, uFortune Makaringe ozojoyina i-Orlando Pirates ngesizini ezayo.
FUNDA: UStuart Baxter usememezele abazodlalela iBafana kwi-Afcon
Lishiye imibuzo iqembu elimenyezelwe uBaxter kwazise kuvele nabadlali beKazier Chiefs, eshaye udaka kwi-Absa Premiership futhi yaphinde yadliwa yiqembu eligijima kwiNFD, iTS Galaxy emdlalweni wamanqamu weNedbank Cup. Kwi-Absa Premiership kuphele isizini isendaweni yesi-9.
Noma iqede isizini isendaweni yesishiyagalolunye iChiefs, uBaxter ubize unozinti uBruce Bvuma, nabadlali basemuva uDaniel Cardoso noRamahlwe Mphahlele.
UCardoso (30) wayebiziwe kwiBafana nangesikhathi ibhekene neLibya emdlalweni wokugcina wokuhlungela i-Afcon. Ebuzwa ngokuqoka lo mdlali uthe uthanda indlela aziphatha ngayo nokuthi uyakwazi ukudlala ezindaweni ezihlukene enkundleni.
“Udinga abadlali abahlukile eqenjini, uthatha inqwaba yabadlali uma uya kumqhudelwano, kodwa uma sengiqoka abadlali abazoqala umdlalo uma sesibhekene ne-Ivory Coast ngiyazi baningi abadlali abazobe bengeneme. Uma uqoka iqembu udinga abadlali abakwaziyo ukukhuthaza abanye. UCardoso uyilolohlobo lo mdlali, ukwazi nokudlala ohlangothini lwesokudla emuva, okuchaza ukuthi singamsebenzisa ezindaweni ezihlukene,” kusho uBaxter.